Jubbaland oo xabsi weyn ka dhisanaysa dacalka Xeebta Kibooro +SAWIRRO | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Jubbaland oo xabsi weyn ka dhisanaysa dacalka Xeebta Kibooro +SAWIRRO
Maamulka Jubbaland ayaa waxa ay dhisanayaan xilligaan xabsi weyn oo noqon doona midka ugu weyn ee ka dhisan Gobolada Jubbooyinka, kadib markii shalay Madaxweyne ku xigeenka labaad uu dhagax dhigay goobta laga dhisaayo xabsigaan.
Xabsigaan waxaa laga dhisayaa dacasha Xeebta Kibooro ee Magaalada Kismaayo, sida ay sheegeen masuuliyiinta Maamulka Jubbaland, waxaana uu noqon doono xabsi caalami ah oo Jubbaland deeganadeeda ku yaallo.
Madaxweyne ku xigeenka labaad ee Maamulka Jubbaland C/qaadir X. Maxamuud Lugadheere, ayaa sheegay in Maamulka Jubbaland uu garowsaday inuu xabsiga halkaan ka dhiso, maadaama muhiim ay tahay in la helo goob nidaamsan oo lagu carbiyo dambiilayaasha lasoo xiro.
Wuxuu sheegay xabsigaan inuu noqon doono mid muhiim u ah ilaalinta xuquuqda aadanaha iyo dhowrista xuquuqda maxbuuska.
Dhaqaalaha ku baxaya dhismaha xabsigaan ayaa waxaa iska kaashanaya ganacsatada reer Jubbaland iyo Maamulka, wuxuuna Madaxweyne ku xigeenka ugu baaqay jaaliyada Jubbaland inay ka qayb qaataan dhismaha xabsigaan.
Maamulka Jubbaland ayaa xilligaan u muuqda mid hor mar ka sameynaya deeganada Maamulkaasi, xilli ay jiraan caqabado kala duwan oo Maamulka uu la kulmaayo.